Akeekkachisaa Qeerroo Bilisummaa Oromo Amboo irraa keennamee -
Akeekkachisaa Qeerroo Bilisummaa Oromo Amboo irraa keennamee
Amajjii 8, 2019
Qeerroon Oromoo Amboo tokkummaan uummata Oromoo akka cimuu fi qabsoon Oromoo wareega qaalidhaan asiin geenye shira qaamota aangoo dheereffachuuf xaxxuu fi diina qabsoo kana boodatti deebisuuf hojjachaa jiruutin boodatti akka hin deebinee fi kallattii irraa hin maqne cimnee hojjenna. Abashan akka nuti hin-deebinee dha dubiin.
Ammafi OPDOn warana ishii daftee Oromiyaa Lixaa keesaa akka baaftu jeena. Jalduu warana gudda akka jiruu irraa geeynee jirraa. Kuni hatatamaan dhaabbachuu baannan tuffii Qeerroo Amboo irratti OPDO dhan deemaa jiru dha. Ammafi
Qeerroon Oromoo Amboo gochaa diinummaa sabboontota Oromoo bilisummaa Oromoof jedhanii manaa bahan miseensota WBO kan amma leenjidhaaf kaampii # Ardaaytaa keessatti leenjiirra jiran irratti raawwatame cimsinee balaaleffanna. Kanan duraa. Qaamota gochaa kana raawwachiisan irratti hatattamaan tarkaanfin akka fudhatamu gafannee turree. Garuu motumman Ethiopia caallisuu filate.
Mootummaan waraana dhiha Oromiyaa irratti maqaa sakatta’iinsa fi WBO hidhannoo hiikkachiisuu jedhuun bobbaase kaasudhaan walii galteen karaa nagaa mootummaa fi ABO giddutti godhamuun rakkoon jirtu karaa nagaan akka furamtu hubachiisnee turree. Kunis motumman OPDO bira darbee waraana filatee saba keenya fixaa jira saamaas jira. Kanafuu Qeerroon Amboo shira xaxaa OPDOn adeemsiftu kana ni-balaleefata.
Ajjeechan guyyaa guyyaan uummata Oromoo lixaa, Gujii, Boorana, Harargee baha gubbaatti adeemsifamuu kuni diinaa biraati jennee hin amannu waan daangaa Oromiyaa fi gidduugaleesaa Oromiyaa keessatti hojjatamuu fakkenyafi Biyyaa naga Jalduu irratti OPDOn hojachaa jirtuu tuffii Qeerroo Amboo fi saba Amboo irratti dhufamuu dha. Kanafu Amboo caallisee tahun hafee jirraa. Ammas Amboo Dirree waraanaa gochu hin- barbaannu. Hatattamaan waraana Raayyaa Ittisa Biyyaa (RIB) Oromiyaa Lixaa ksessaa guyyaa 7 keessatti waraana wayyaanee kana basuu baannaan nu qeerroon Amboo qabsoo cimmatti deemaa jirraa.
OPDOn dhaabbilee siyaasaa Oromoo shira addaan fageessu fi uummata keenya addaan qoodu xaxuu dhiistee paartiilee Oromoo hundaa walitti fiddee mariisisuun dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti ijannoo tokkoon akka hojjatan ni hubachiisna kana, tahu baannaan kana booda OPDO hin-beeknu.
Dhaabbileen siyaasaa Oromoo rakkoo xixiqqoo gidduu teessan jirtu dhiistanii hatattamaan walitti dhuftanii gaaddisa tokko jalatti deebitanii saba keessan tokkoomsudhaan qabsoo qeerroon Oromoo harka duwwaa diina dura dhaabbattee wareega qaalii itti kaffaltee asiin geesse alagaa guddaa nurratti uumtanii Oromoo xinneesuu dhaf yaaltani kuni asirratti dhaabachuu qaba.Qeerroon Amboo lafee gootota Oromoo cabdeen, dhiiga gootota Oromoo bilisummaaf dhangala’een, Lubbuu gootota Oromoo gammoojjii keessatti allaattin nyaatten isin gaafanna tokko tokkon. Callisuun wallaalumma miti. Basaastuu hunda Amboo keesaa basuu baannaan tarkaffii cimaa irratti fudhachuu dhaf qophii xumurree jirraa
Dabballoonni fi rogeeyyin OPDO dhugaa dhoksuu, duula ABO irratti banuu, holola paartiilee fi saba Oromoo addaan qoodu irraa of qusattanii hojii tokkummaa Oromoo cimsu akka hojjattan Kanan dura akeekkachiisnee turee garuu gurraa OPDO keessa hin galle, Amma ammatti. Rogeeyyi fi dabballoonni ABOtis gochaa ABO fi OPDO giddutti wal-dhabdee hammeesu fi saba keenya qoqqodu irraa of qusattanii tokkummaa Oromoo cimsuu irratti akka hojjattan isiniif dhaamnee turee kunis hin fudhatamne.
Ilmaan Oromoo wallaggaa irraa, Finfinnee irraa, Buraayyuu irraa, Moyyaalee, Gujii irraa badii tokko malee hidhamanii hatattamaan akka hiikaman ergaa keenya dabarsina.Godinaa fi aanaa irratti haaromsi gaggeeffamaa jiru kan kijibaan kaabineen saamichaaf haala walii mijeessaa jirtuun waan taheef haaromsi sadarkaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru sadarkaa godinaa fi Aanatti akka gad bu’uuf koreen Oromiyaa irraa dhaabbatee akka fedha uummataatti haaromsi haqaa haa gaggeeffamu.
Maqaa investimentii jedhuun lafa hiyyeessa Oromoo abbootii qabeenyaf kennuun haa dhaabbatu. Oromoni Misensaa OPDO diyaaspora irraa dhufee lafti akka malee kennaa jiran kuni hatattamaan dhabachuu qaba. Yakkamtoonni kuni gati hinqabani Oromo addaan qoduu malee. Kanaafu seeran haa gaafataman.
Qeerroon Amboo hanga mirgi abbaa biyyummaa uummata Oromoo mirkanaa’ee ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanitti ajjeefamuu, saamamuu, doorsifamuu irraa bilisa tahuun abbaa barbaadan filatanii ittiin of bulchuun daangaan Oromiyaa kabajamee bilisummaan alaabaa teenya handhuura Oromiyaa Finfinnetti gad dhaabbachuun seeran injifannoo dhiigan arganne dhiiga keenyan tiikfachaa qabsoon karaa nagaa eegalle itti fufa
Mootummaan rakkoo ilmaan Oromiyaa lixaa Oromoo Dirree dhawaa, Hararii, Walloo, Raayyaa fi iddoo adda addaatti Oromummaa isaanii qofaaf irra gahaa jiru furuun lubbuun jiraachuu ilmaan Oromoof hatatamaan akka wabii kennu ni hubachiisna
Qaamonni maqaa Oromoon miidiyaa hawaasaa irratti gosummaa, gandummaa, naannummaa, amantaadhan Oromoo addaan qoodudhaaf tokko faarsanii tokko abaarudhaan shira xaxan qeerroo fi uummata Oromoo kan bakka hin buune waan tahaniif qeerroon qaamota gochaa diiggaa raawwatan diina guddaa uummata Oromoo waan tahaniif cimsinee balaaleffanna.
Qeerroon Amboo gootota hooggantoota sabaa kan qabsoon karaa nagaa injifannoo amma arganne kun sadarkaa kanarra gahuuf gootota Oromoo wareega qaalii qeerroo bilisummaa Oromoo waliin kaffalan hunda kabajaa guddaa qabna. RIB Jalduu keessaa hatattamaan Ammaa caalqabee ummanni keenya osoo hin miidhamiin akka dafee bahu.
QEERROO BILISUMMAA OROMOO ABMOO
← ሰላም ይስፈን ዘንድ ጦርነቱ ቆሞ ስምምነታችን ልታደስና ልጠናከር ይገባል ‘Ethiopia is in transition defined by no clear direction’: Tsadkan Gebretensae →